खेर गयाे ओली र देउवा हालेको भोट ! • raradiodarpan.com
खेर गयाे ओली र देउवा हालेको भोट !
२ जेष्ठ , काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले हालेको भोट खेर गएको छ । उनीहरु दुबैको वडामा उनीहले भोट हालेका पार्टीले चुनाव हारेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले मतदान गरेको सूर्यविनायक नगरपालिका– २ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार प्रदीप कार्की १ हजार ५११ मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम् प्रतिश्पर्धी एमालेका विश्वराज विष्टले १ हजार ३०५ मत पाएक। यो वडामा वडाध्यक्षसहित कांग्रेसको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ।
ओलीले वडा नं. २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति केन्द्रमा मतदान गरेका थिए। उनको निर्वाचन क्षेत्र झापा भए पनि भक्तपुरको बालकोटबाटै मतदान गर्ने गरेका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वडामा नेपाली कांग्रेस पराजित भएको थियाे। डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कांग्रेस पराजित भएको हो। याे प्रधानमन्त्री देउवाकाे मतदाता नामावली भएकाे वडा हाे।
देउवाको वडासमेत रहेको वडा नम्बर १ रुवाखोलाको अध्यक्षमा कांग्रेसका पूर्वनेता कर्ण मल्ल नेतृत्वको कांग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी विजयी भएका छन्।
उनले ६७३ मत प्राप्त गर्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका चन्द्रबहादुर देउवाले ५४४ मत पाएका छन्। उक्त वडामा कांग्रेस बीपीको प्यानल नै विजयी भएको हो।
यसैबीच, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका निर्वाचनको नतिजाहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। अहिलेसम्म ७६ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ।
सोमबार बिहान ६ बजेसम्मको अपडेटमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धलाइ चक्मा दिँदै एमालेले सबभन्दा बढी स्थानीय तहमा जित हासिल गरेकाे छ ।
यस्तै, कांग्रेसले भने एमालेलाई पछ्याइरहेको छ। अहिलेसम्मकाे नतिजामा जसमा नेकपा एमाले २८, नेपाली कांग्रेस २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २१ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २ स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेका छन् ।
उपप्रमुखमा सबभन्दा बढी कांग्रेसले ३६, एमाले २१, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी ४, जनता समाजवादी पार्टी १ र स्वतन्त्र १ जितेका छन् ।
मतगणना जारी स्थानमध्ये प्रमुखतर्फ कांग्रेसले सबभन्दा बढी २६८, एमाले १६७, माओवादी केन्द्र ९५ र एकीकृत समाजवादीले १७ स्थानमा अग्रता लिएका छन् । यस्तै जसपा २८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ११ स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन् ।